Suuqa kala iibsiga ciyaartooyda - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Suuqa kala iibsiga ciyaartooyda
Suuqa kala iibsiga ciyaartooyda
Manchester United ayaa la hadashay wakiilada Tottenham Hotspur tababaraheeda Mauricio Pochettino, oo 43 jir ah, si uu u badelo Louis van Gaal,oo 64 jir ah. Waxaa daabacay maanta The Sun
Weeraryahanka Liverpool Mario Balotelli,oo 25 jir ah, ayaa ku soo laaban doona Anfield, AC Milan Ma doonayo inay si joogta ah ula saxiixato marka uu amaah dhameystodhamaadka xilli ciyaareedkan. Waxaa lagu qoray warkaan Calciomercato.com
Chelsea ayaa loo sheegay inay iska ilaawaan tababaraha kooxda Juventus Massimiliano Allegri xagaaga soo socda. Sida lagu sheegay London Evening Standard
Laakiin warar meelo kale laga helayo ayaa sheegay in Juventus ay diyaar u yihiin in Manuel Pellegrini, oo 62 jir ah shaqo siiyaan, haddii Chelsea uu ku biiro Allegri. Sida lagu sheegay Daily Express
Wojciech Szczesny,oo 25 jir ah, waxa uu ku laaban doonaa Arsenal xagaagan ka dib markii Roma ay u shegeen tababare Arsene Wenger in aysan dooneyn inay la wareegaan goolhayaha Waxaa lagu daabacay Independent
Watford ayaa 500,000 euros oo u dhiganta (£ 387,840) ka helaysa Porto marka daafaca Mexico Miguel Layun, oo 27 jir ah uu ku biiro kooxda reer Portugal si amaah ah. Waxaa shaaciyay Football via Watford Observer
Weeraryahanka kooxda Manchester United ee Belgium Adnan Januzaj, oo 21 jir ah, iyo daafaca u dhashay Uruguay Guillermo Varela-,oo 22 jir ah, ayaa ku dhaawacmay kulankii 21-jirada ee kooxda United waxaa daabacay. Daily Mirror
Weeraryahanka kooxda Birmingham City Wes Thomas, oo 29 jir ah, ayaa sheegay inuu mustaqbalkiisa garoonka St Andrew qurux badan yahay” ka dib markii uu amaah League One kooxda ka dhisan ee Bradford City kaga yimid. Waxaa lagu qoray Telegraph & Argus.
Goolhayaha u dhashay Italy-ee Sunderland Vito Mannone, oo 27 jir ah, ayaa sheegay in ku dhawaad katagi lahaa kooxda Black Cats inta uu furnaasuuqa kala iibsiga bisha Janaayo. Sida ay baahisay Maanta Sunderland Echo
Indha Indheeyihin ka caawiyay Leicester City saxiixa weeraryahanka Algeria Riyad Mahrez, oo 24 jir ah, ayaa ku biiray Arsenal ka hor kulanka labada koox ee Emirates Axada Sida uu shaaciyay Daily Telegraph.
Previous articleDhegeyso Barnaamijka xiisa badan ee Muuqaalka Maanta 09-02-2016
Next articleAhlu Sunna oo ka soo hor jeesatay dalabkii Wasiir Odawaa